Ma dooneysaa inaad ogaato siyaasaddii ugu dambeysay ee arrimaha dibedda Mareykanka? Ma rabtaa inaad wax ka ogaato isbeddelada ku yimaada canshuuraha la soo dejiyo iyo kuwa laga dhoofiyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee Kuuriyada Koonfureed? Ma rabtaa inaad ogaato qatarta qashinka COVID-19 ee nolosha aduunka? Si fiican u hubi wararka CFM maanta. | Jesson
Ma dooneysaa inaad ogaato siyaasaddii ugu dambeysay ee arrimaha dibedda Mareykanka? Ma rabtaa inaad wax ka ogaato isbeddelada ku yimaada canshuuraha la soo dejiyo iyo kuwa laga dhoofiyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee Kuuriyada Koonfureed? Ma rabtaa inaad ogaato qatarta qashinka COVID-19 ee nolosha aduunka? Si fiican u hubi wararka CFM maanta.
1.Madaxweynihii Mareykanka Joe Biden khudbadiisii ​​uhoreysay ee siyaasada arimaha dibada tan iyo markii uu xafiiska lawareegay wuxuu kudhawaaqay seddex go'aan: (1) Mareykanka wuxuu joojinayaa taageeradiisa weerarada weerarada Sacuudiga ee Yemen; (2) in la joojiyo bixitaanka ciidamada ee Jarmalka; iyo (3) kordhinta tirada qaxootiga ee uu aqbalay Mareykanka.
Forbes waxay soo saartay liistada 50ka shirkadood ee ugu caansan adduunka ee 2021, oo ay ku jiraan Baidu, Ant Ant, Ping Group, Tencent, China Construction Bank iyo Warshadaha iyo Bangiga Ganacsiga ee Shiinaha. Shirkadaha Mareykanka sida Facebook, Amazon, Citigroup iyo MasterCard ayaa liiska ka dhacay.
3. World Gold Council: kadib laba bilood oo isku xigta oo dahab saafi ah oo ETF ah ay soo baxeen bilaha Nofeembar iyo Diseembar 2020 (wadar ahaan 148.8 tan), soo dejinta dahabka caalamiga ah ee ETF ayaa mar kale soo gaadhay Janaayo 2021, iyada oo ay soo gashay 13.8 tan (qiyaastii US $ 1 billion, an kordhinta boqolkiiba 0.4 ee hantida maamulka). Waqtigan xaadirka ah, hantida caalamiga ah ee ETF ee hoos yimaada maareynta ayaa gaaraya 3765 tan ($ 226 bilyan), kaliya 4 boqolkiiba ayaa ka hooseysa rikoorka 3915.8 tan ($ 244 bilyan) oo la dejiyay horraantii Nofeembar.
4.Dowladda Ingiriiska ayaa isugu yeertay shirkado dhowr ah si ay ugala hadasho sida looga qaado canshuuraha ganacsiga internetka. Canshuur ayaa loo soo bandhigayaa tafaariiqleyda iyo shirkadaha tikniyoolajiyadda kuwaas oo macaashkoodu kor u kacay intii lagu jiray COVID-19 'faafa, iyo hal mar oo ah “canshuurta macaashka xad-dhaafka ah” ayaa sidoo kale laga shaqeynayaa. Qorshooyinka canshuurta waxaa loo soo bandhigi karaa qeybta labaad ee 2021.
5.Xiriirka Faransiiska ee Warshadaha Quruxda: sanadkii 2020, Shiinaha wuxuu noqday dhoofiyaha ugu weyn ee wax soo saarka quruxda Faransiiska markii ugu horeysay. Sannadkii 2018, Shiinuhu wuxuu ahaa waddanka toddobaad ee ugu weyn ee dhoofinta qurxinta Faransiiska, korna u kacay kaalinta afraad ee sannadka 2019. Sannadkii 2020-kii, dhoofinta qurxinta Faransiiska waxay dhamaayeen 15.7 bilyan oo Yuuro, taas oo hoos uga dhacday boqolkiiba 11.8 isla muddadaa isla sannadkaas 2019. Isla mar ahaantaana, iibka qurxinta ee Shiinaha ka yimid Faransiiska ayaa kor u kacay 20.7% halkii sano ka hor.
6.Kastamka Xafiiska Kastamka: Sannadkii 2020, dhoofinta alaabada la isku qurxiyo ee Kuuriyada Koofureed ayaa kordhay 16.1% marka loo barbardhigo isla xilliyadii la soo dhaafay, illaa US $ 7.57517 billion. Dhoofinta Shiinaha waxay kordhay 24.5% sanad-sanadle ah US $ 3.81 bilyan, halka dhoofinta Mareykanka, Japan iyo Vietnam ay kordheen 21.6%, 59.2% iyo 18.0%, siday u kala horreeyaan. Saamiga Shiinaha ee suuqa dhoofinta waxyaabaha la isku qurxiyo ee Kuuriyada Koofureed wuxuu kordhay 50.3% halka uu ka ahaa 46.9% sanadka 2019.
7-dii Febraayo, saraakiisha caafimaadka Congo waxay xaqiijiyeen in cudurka Ebola uu ka dilaacay bariga Congo. Haweeney ayaa u dhimatay Cudurka Ebola Febraayo 3, kadib markii ay dareentay maalmo aan fiicnayn, kadib waxay aaday rugta caafimaadka si loo baaro ka dibna isbitaalka ayaa lagu daaweeyaa, laakiin waxay dhimatay ka hor inta aysan soo bixin natiijada baaritaanka. Waqtigaan la joogo, dowladdu waxay raadineysaa xiriir kasta si loo xakameeyo faafitaanka.
8. Febraayo 8, Ururka Isbitaalka Gobolka Washington wuxuu shaaca ka qaaday in tobanaan kun oo N95 waji ah oo ay soo iibsadeen isbitaalada maxalliga ah iyo ururada ay ahaayeen been abuur, qiyaastii 300000. Casey Shaw, madaxweynaha iyo madaxa fulinta ee Ururka Isbitaalka Gobolka Washington, waxay sheegtay inay ku wargeliyeen. isbitaalada si ay u sii daayaan lambarada dufcadda ah ee lagu ogaaday inay yihiin waji been abuur si looga saaro keydka.
9. Sida ku cad wararka 8-dii Febraayo, iyadoo lagu faafiyay cudurka loo yaqaan 'coronavirus', dhulku wuxuu kaloo soo saaray qashin badan oo ah COVID-19. Koox caalami ah oo ka shaqeysa arrimaha deegaanka ayaa ku qiyaastay in 1.56 bilyan oo waji ah ay u qulqulayaan bada sanadka 2020, taasi oo qatar ku ah nolosha badaha. Bishii Sebtember ee la soo dhaafay, khubarada cilmiga xayawaanku waxay ka heleen xeebta Baraasiil baangi meyd ah waxayna caloosheeda ka heleen maaskaro dhameystiran oo N95 ah.
Waqtiga boostada: Feb-09-2021